TAXANAHA FAAQIDAADA SUUQA: Laba Xidig oo Man United Ka Dhigi Doona Mucjiso Aan La Qaban Karin, Sadex Sababood oo ay Barcelona Ugu Saxsantahay Ceyrsashada Veratti, Bedelka Tottenham Ee Kyle Walker, Waxa ay Bakayoko Iyo Rudiger Kusoo Kordhin Karaan Chelsea, Iyo Weliba Qodobo Kale Oo Xiiso Leh. – Kooxda.com
Home 2017 July Champions League, Europa League, France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino TAXANAHA FAAQIDAADA SUUQA: Laba Xidig oo Man United Ka Dhigi Doona Mucjiso Aan La Qaban Karin, Sadex Sababood oo ay Barcelona Ugu Saxsantahay Ceyrsashada Veratti, Bedelka Tottenham Ee Kyle Walker, Waxa ay Bakayoko Iyo Rudiger Kusoo Kordhin Karaan Chelsea, Iyo Weliba Qodobo Kale Oo Xiiso Leh.
TAXANAHA FAAQIDAADA SUUQA: Laba Xidig oo Man United Ka Dhigi Doona Mucjiso Aan La Qaban Karin, Sadex Sababood oo ay Barcelona Ugu Saxsantahay Ceyrsashada Veratti, Bedelka Tottenham Ee Kyle Walker, Waxa ay Bakayoko Iyo Rudiger Kusoo Kordhin Karaan Chelsea, Iyo Weliba Qodobo Kale Oo Xiiso Leh.
July 17, 2017 · by	Mustafa Atam · 32
Asalaamu Calaykum Waraxmatulaahi Wabarakaatuhu dhamaan akhristayaasheena sharafta lahoow Maalin Wanaagsan meel kasta oo aad dunida daafaheeda ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeenii usbuuclaha ahaa ee TAXANA FAAQIDAADA SUUQA oo uu usbuuc walba maalin kasta oo isniin ah aan idinla socodsiiyo aniga oo Mustafe Atam ah.
Suuqa kala iibsiga xagaagan ayaa haatan furan waxaana iskasoo daba dhacaya wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo aad maalin kastaba kala socotaan majallada Kooxda.com oo si hagar la’aana idiinku soo tabisa dhamaan wararka caalamka kubada cagta iyo Ciyaaraha.
Hadaba barnaamijkeenan usbuuclaha ah ayaynu aalaaba ku faaqidnaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo taxliilaadka falanqeynta xidigaha iyo dhamaan kooxaha la isla xiriirinayo.
Barnaamijkeenan usbuucan ayaynu ku faaqidaynaa mawduucyo ay kamid yihiin: Laba xidig oo Man United ka dhigi doona mucjiso aan la qaban karin, Sadex Sababood oo ay Barcelona ugu saxsabtahay Ceyrsashada Veratti, Bedelka Tottenham Ee Kyle Walker, Waxa ay Bakayoko Iyo Rudiger kusoo kordhin karaan Chelsea, iyo weliba qodobo kale oo xiiso leh.
Laba Xidig Oo Hadii Ay Lasoo Wareegaan Kooxda Manchester United Ka Dhigi Doona Danab Aan La Qaban Karin
Kooxda Manchester United ayaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda si weyn ugu jirta waxayna ilaa iyo haatan lasoo wareegeen laba xidig oo wacdaro ka dhigay kubada cagta xilli ciyaareedkii horr.
Romelu Lukaku oo ay kala soo wareegeen naadiga Everton iyo weliba Victor Londelof ayaa si rasmi ah uga mid noqday safka uu tababare Mourinho ku dagaal gali doono xilli ciyaareedkan.
Hadaba awooda Manchester United intaas kuma eka ee weli waxaa jira labo xidig oo hadii ay Shayaadiinta cascas lasoo wareegaan ka dhigi doona mucjiso aan lala tartami doonin.
Xubintan ayaynu ku falanqeyn doonaa labadaas xidig ee kooxda Manchester United ka dhigi doona Danab aan la qaban karin.
28 jirkan ayaa laga yaabaa inaysan jamaahiiru u arkin xidiga ku haboon Red Devils lkn waa xidig dhab ahaantii buuxin doona boosaska baalaha.
Wiilkan reer Croatia waa ragii loogu talo galay koox Man United oo kale ah wuxuuna isku darsaday Awood, xawli, iyo weliba boos qaadasho. Wuxuu sidoo kale ku dhiiradaa inuu kubada labada lugoodba kaga shaqeeyo.
Wiilkan wuxuu balaayo ku qabaa inuu baasha bidix kasoo galo. Xilli ciyaareedkii hore kooxdiisa wuxuu u dhaliyay 11 Gool isaga oo dhamaan goolashan ka dhaliyay baasha bidix ee uu kasoo galo. Waxqabadkiisii waxaa intaasi u dheeraa inuu 8 caawin sameeyay isaga oo wadarta 19 gool gacan ka geystay xilli ciyaareedkii tagay.
Tayada iyo awooda dhabta ah ee xidigan waa mid la taaban karo isla markaana cudud muuqata kusoo kordhin karta kooxda shayaadiinta cascas sidaas darteed waa inuu tababare Jose Mourinho u dhaqaaqaa xidigan si ay kooxdiisu u noqoto mid aan la joojin karin.
Kooxda Monaco waxey aheyd mid aan magac weyn ku laheyn dhamaan caalamka lkn xilli ciyaareedkii u danbeeyay ayay muujiyeen magacooda iyo awooda ay leeyihiin waxeyna gaareen wareega afar dhamaadka ee tartanka Champions League. Xidiga 23 jirka ah ee Fabinho ayaa kamid ahaa xidigihii masuulka ka ahaa inay kooxdooda ka saacidaan horyalka League1 iyo weliba inay meel fiican ka gaaraan UCL.
Xidigan wuxuu kooxdiisa xilli ciyaareedkii hore u ansixiyay 11 Gool isaga oo 50 kulan u saftay. Xidigan ayaa ah mid ku haboon taaktikada iyo weliba kooxda Jose Mourinho.
Wuxuu awoodaa inuu ka ciyaaro daafac danbe, daafac baal danbeed, iyo khad dhexe oo burburiye ah.
Waa xidig heersare ah. Waa xidig waxqabad leh. Waa xidig awood leh oo xoogan. Waa nin xirfad leh. Sidaas darteed xidigan ayaa kooxda Man United ka saacidi kara inay horyaalka EPL khuurto ku qabsadaan.
Iskusoo wada duuboo labadan xidig ee aan kor ku xusnay ayaa ah aalada kaliya ee Jose Mourinho ka maqan si uu usoo celiyo sumcadii ay shayaadiinta cascas ku lahaayeen qaarada Yurub.
Waa Kuma Bedelka Dhabta Ah Ee Kyle Walker Oo Tottenham Ka Baxay?
Kooxda Tottenham ayaa sanadihii u danbeeyay kamid noqotay kooxaha ugu tukna weyn wadanka Britian waxeyna muquuniyeen kooxo magac iyo muuqba kuleh horyaalkan.
Labadii sano ee u danbeysay ayay Tottenham aheyd kooxda kaliya ee si naf lacaarid ah ula loolanta kooxihii horyaalka ku guuleystay. Sanadahan danbe waxay kooxda Spurs kasoo qeyb gashaa tartanka kooxaha qaarada yurub ee UCL walow aysan wax saameyn ah ku yeelanin.
Spurs ayaa iska dirtay xidigeedii Kyle Walker waxeyna lacag rikoor ah uga iibiyeen dhigooda Manchester City.
Hadaba yuu noqon karaa bedelka xidigan ee kooxda Reer London?
Macallinka Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa booska Walker ka ciyaarsiin jiray Xidiga lagu magacaabo Kieran Trippier balse xidigan uma muuqdo inuu noqon doono dookha koowaad ee macallinkan xilli ay kolxdiisu ka qeyb qaadan doonto Champions League. Magicii ugu danbeeyay ee dhanka daafaca ah kaasi oo lala xiriiriyo kooxda Spurs wuxuu ahaa Ricardo Pereira.
Waa Kuma Ricardo Pereira?
Xidigan ayaa la aaminsanyahay inuu noqon karo bedelka Walker ee Tottenham sida ay hadal hayaan dadka ku xeeldheer falanqeynta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Xidigan oo u ciyaara kooxda boortaqiiska ah ee FC Porto ayaa la sheegay inuu Tottenham ku kici doono aduun dhan £22 Milyan Oo Euro. 23 jirkan wuxuu ku dhashay magaalada caasimada ee Lisbon. Wuxuu wakhti lasoo qaatay afar kooxood balse wuxuu soo ifbaxay kadib markuu u ciyaaray da’yarta Porto.
Pereira wuxuu ka ciyaari karaa labada baal ee daafaca danbe wuxuu sidoo kale buuxin karaa baal weerar ah.
Wuxuu ku caan baxay taakalka iyo istuurid khibradeysan. Way adagtahay in kubad lala daba maro Pereira oo taagan. Lagumana riyoodo in kubadaha hawada sareag laga dulqaado. Waa nin balo ku qaba kubadaha kor loo dalaco.
Waxay aad isugu qaab ciyaareed dhawyihiin Kyle Walker. Waa xidigaha dhif iyo naadirka ah oo buuxin kara booska Walker ka baxay ee Tottenham.
Muxuu Antonio Rudiger Kusoo Kordhin Doonaa Kooxda Chelsea??
Tababare Antonio Conte ayaa kooxda Chelsea ka caawiyay koobka Premier League balse xilli ciyaareedkan ayaa walaac laga muujinayaa safka Blues hadii aysan xidigo tayo leh lasoo wareegin.
Waxaa isha aad loogu hayaa inay The Blues lasoo wareegaan xidigo magac iyo muuqba ku leh qaarada yurub balse weli dhinaca saxiixyada weerarka ma aysan ka sameyn horumar wanaagsan.
Ilaa iyo haatan Chelsea waxay lasoo wareegtay sadex xidig oo kala ah Willy Cabalero, Antonio Rudiger iyo Teamoue Bakayoko.
Antonio Rudiger ayaa ah saxiixa labaad ee ay Blues sameysay xagaagan. Waxay xidigan kulasoo wareegtay aduun dhan £34 Milyan oo Euro.
Hadaba muxuu xidigan kusoo kordhin karaa Blues? Si aynu waxqabadkiisa u kormeerno bal aynu xidigan barbar dhigno daafaca Chelsea ee David Luiz.
David Luiz Wuxuu Dhameys tiray 84% baasaskiisii xilli ciyaareekdii dhamaaday ee Chelsea. Antonio Rudiger isagana wuxuu si sax ah u dhameys tiray 83% wadarta baasaskiisii xilli ciyaareedka ee horyaalka Serie A.
David wuxuu ku guuleystay Celceliska 0.85 Taakal kulan kasta, halka Rudiger uu ku guuleystay celcelis ahaan 1.39 Taakal kulan kasta.
Kubad qaadashada David Luiz wuxuu ku guuleystay 86% inuu ka qaado xidigaha kasoo hor jeeda halka Rudiger uu ku guuleystay 69.57% inuu kubada ka qaado Lidkiisa kasoo horjeeda.
Kubadaha hawada wuxuu David ku guuleystay 55.17% halka Rudiger isagana uu ku guuleystay 55.44%.
Sidoo kale isku dhigida shuudadka, Ka saarida kubadaha iyo waxqabadyo kale oo badan David Luiz ayaa ka sareeya Rudiger.
Labada xidig qaladaad way sameeyeen balse midkoodna khalad uu sameeyay gool kuma iman.
Si kastaba ha ahaatee labada xidig ayaa isku qaab u ciyaara balse labadoodu isku boos kama ciyaaraan. Waa macquul inay kala duwanaanshaha Istaaktikada ay keenayso boosaska kala duwan ee labada xidig ka ciyaaraan. Balse Rudiger ayaan ka laalaadin Luiz isaga oo wax badan ay iksu dhowyihiin waxqabadkooda.
Falanqeynta waxqabadka Rudiger iyo waxa uu kusoo kordhin karo naadiga Chelsea waxaa kuugu filan istaaktikada kor ku xusan.
Sadex Sabab Oo Muujinaysa Sida Ay Barcelona Ugu Baahantahay Marco Veratti
Mudo sanad iyo dheeraad ah ayaa naadiga Barcelona lala xiriirinayaa xidiga khadka dhexe ee kooxda PSG waa Marvo Veratti e.
Xidigan ayay kooxda Barcelona diyaar u tahay inay kulasoo wareegto aduun dhan €100 Milyan oo Pound balse naadiga PSG ayaan diyaar u aheyn inay iska fasaxdo xidigan.
Xidiga ayaa dhawaan kooxdiisa qalinka ugu duugay qandaraas cusub kaasi oo ku beegan xagaaga 2021ka. Qandaraaskan cusub ayaa caddeynaya inaysan jirin sabab ku qasbaysa PSG inay iska iibiyaan wiilkan.
Hadaba maadaama ay kooxda Barcelona u waalanayso xidigan ayaynu fiirin doonaa sadex asbaab kuwaas oo muujinaya inay naadiga reer Catalania ku saxsanayd Ceyrsashada xidigan.
1. Waa Saxiix Saameyn Muuqata Yeelan Doona
Waayadii u danbeeyay Barcelona kuma aysan faa’iidin saxiixyadii badnaa ee ay sameeyeen marka laga reebo Luis Suarez iyo Ivan Rakitic.
Xagaagii hore ayaa ahaa midkii ugu liitay ee ay saxiixyada Barcelona saameyn muuqata keeni waayeen. Saxiixyada Paco Alcacer, Andre Gomes iyo Lucas Digne ayaa dhamaantooda noqday hal bacaad lagu lisay.
Sidaas daraadeed, Jamaahiirta Blaugrana waxey rajeynayaan inay isbedel muuqda ka dareemaan saxiixyada macallinka cusub ee Ernesto Valverde.
Veratti ayaa hadaba ah saxiix heersare ah kaasoo Barcelona ay ku faa’iidi doonto isla markaana la qabsan doona taaktikada kooxda hadii ay lasoo wareegto.
2. Waa Bedelka Macquulka Ah Ee Iniesta
Maalmihii dahabiga ahaa ee ay iska garab ciyaari jireen Xavi, Iniesta iyo Messi ayaa ahaa kuwii ugu guulaha badnaa ee Barcelona. Xavi wuu ka huleelay kooxda isaga oo duqoobay. Iniesta isagana wadadii Xavi ayuu qarka u saaranyahay. Messi Laftirkiisu wax badan kama danbeyn doono.
Bedelka Xavi waxay kooxdu heshay Ivan Rakitic. Bedelka Messi waxaa noqon doona Neymar balse waxaa isweydiin mudan yaa bedeli doona Iniesta?
Hubaal, bedelka ugu macquulsan ee Andreas Iniesta waa Marco Veratti. Waa xidig u qalma inuu xirto maaliyada Barcelona waana mucjiso noqon doona dhiiga cusub ee Barcelona.
3. Xidig Waxqabada Leh
Weli ma isweydiisay waxqabadka Marco Veratti istaatiko ahaan? Weli ma isbar-bar dhigtay xidigaha khadka dhexe ee Barcelona iyo Veratti?
Baasaska: xilli ciyaareedkii hore Veratti wuxuu dhameys tiray 87.5 baas kulan kasta wuxuuna baasaskiisa saxay 88.4%. Xidiga ugusoo dhow kooxda Barcelona waa Sergio Biscuet kaasi oo dhameys tiray 66.5% Baas isaga oo saxay 89%.
Baasaska Muhiimka Ah: Veratti wuxuu dhiibay celcelis ahaan 1.4 baas oo halis ah isla markaana goolal keeni kara kulan kasta. Xidiga ugusoo dhaw reer Barcelona waa Iniesta kaasi oo baasaska muhiimka ag bixiyay celcelis ahaan 1.1 kulan kasta.
Taakalada: Veratti wuxuu sameeyay celcelis ahaan 4.1 taakal kulam kasta. Xidiga Barcelona ee ugusoo dhow waa Biscuet kaasi oo sameeyay celceliska 2.5 taakal kulan kasta.
Akhriste ma kuu muuqataa waxqabadka Veratti heerka uu joogo? Intaas waxaa dheer inay da’diisu tahay kaliya 24 jir weliba jooga PSG.
Sadex Sabab Oo Uu Andrea Belotti U Yahay Weeraryahanka Ku Haboon Chelsea
Kooxda Chelsea ayaa weli suuqa ugu jirta inay lasoo wareegaan weeraryahan heer caalami ah iyaga oo isku hubaynaya xilli ciyaareedka cusub.
Tababare Antonio Conte ayaa iska fasaxay weeraryahankiisa Diego Costa kaasi oo ku biiri kara kooxdii u muujisa xiise.
Hadaba xubinteenan waxaynu ku falanqeyn doonaa sadex asbaabood oo u tilmaamaya Chelsea inay xidigan saxiixiisa ku dhaqaaqaan.
1. Xiriirka Xidigan Talyaaniga iyo Conte
Tababare Antonio Conte wuxuu xiriir wanaagsan la leeyahay dhamaan kooxaha iyo xidigaha ka ciyaara horyaalka Talyaaniga. Kaliya ma ahan inuu horyaalkaas macallin kasoo ahaa balse waxaa sumcada uu ka helayo ayaa ah inuu ahaa tababarihii xulka qaranka Talyaaniga.
Conte waa nin fahansan Andrea Beloti. Walow uu maalmo kooban ka hoos ciyaaray intii uu macallinku qaranka leylinayay, hadana waa macallin fahmaya xidigan iyo qaabka uu u ciyaarayo intaba.
2. Farsamo Yaqaan Loo Sameeyay EPL
Marka aad u fiirsato awoodaha iyo xeelada xidigan, waa nin aad moodo in loo sameeyay hoyaalka Ingiriiska. Wuxuu ku qalabeysan yahay tayadii loogu talo galay xidigaha guulaha kasoo hooya horyaalka Ingiriiska.
Waa xooganyahay, caaboonyahay, kubada sarena waa ku fiicanyahay, Goolashana wuxuu ka toogan karaa meesha uu doono.
Walow uusan khibrad hore u laheyn horyaalka Ingiriiska, hadana waa nooca ciyaartoy ee kusoo bixi kara qaab ciyaareedka Ingiriiska.
3. Waa Dookha Ugu Wanaagsan Ee Chelsea
Hadii adiga shakhsi ahaan lagu weydiiyo soo dooro Sadexda xidig ee kala ah Belotti, Aubameyang, Iyo Morata Midkee ayaad dooran laheyd??
Wakhti xaadirkan, Shaki la’aan dadka kubada cagta ku xeel dheer waxay isku raaceen inay dooran lahaayeen Andrea Belotti, anigana waan ku raacsanahay.
Marka laga yimaado halista sadexdan gooldhaliye, hadana qiimahooda ayaa kala qaalisan. Aubameynag waxaa lagu heli karaa £70 Milyan oo Euro. Morata isagana waxaa lagu heli karaa £80 Milyan oo Euro. Lkn labadan xidigba waxay u baahanyihiin heshiis in lala gaaaro iyaga iyo kooxahoodaba. Kooxaha xidigahan lama hubo inay fasixi doonaan hadii lacagtaasi miiska la saaro.
Dhinaca kale Andrea Belotti heshiiskiisa waxaa lagu burburin karaa 89 Milyan Oo Euro oo shuruud la’aan ah. Ma jiri doonto wax heshiis wada xaajood ah oo kooxda looga baahanyahay hadii lacagtaasi miiska la saaro. Sidaas darteed saxiixa Belotti ayaa ka howl yar labadaas xidig ee kale. Kaliya waxay u baahanyihiin inay xidiga ku qanciyaan inuu Stamford Bridge yimaado.
Sidaas daraadeed inaga oo tixgalinayna asbaabahaa sare ku xusan, Andrea Belotti ayaa ah xidiga ugu wanaagsan ee u qalma inay Chelsea xagaaga lasoo wareegto.
Maxay Imaanshaha Bakoyako Ee Chelsea Ka Dhigantahay?
Khadka dhexe ee kooxda Monaco Tiemoue Bakoyako Ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Blues aduun dhan £40 Milyan. Xidigan ayaa noqonaya saxiixii sadexaad oo ay kooxda galbeedka London ka dhisan sameeyso. Waxeyna horay ulasoo wareegeen xidigaha kala ah Willy Cabalero iyo Antonio Rudiger.
Hadaba maxay ka dhigantahay Imaanshaha Bokayako ee Chelsea??
Imaanshaha xidigan ayaa la micno ah inaan boos loo heli doonin 28 jirka reer Croatia ee Nemanja Matic.
Khadka dhexe ee Chelsea ayay ku midoobi doonaan labada xidig ee reer France waa N”Golo Kante iyo Tiemoue Bokayako taasi oo la micno ah inuusan Matic boos joogta ah heli doonin.
Waxaa la fahansanyahay in Matic loo sheegay inuusan boos uga banaaneyn shaxda tababare Antonio Conte Maadaama laga reebay xidigaha Chelsea ee ka qeyb galaya kulamada saaxiibtinimo ee Pre Season-ka.
Ma dhacayso inay iska garab ciyaaraan labada xidig ee reer France iyo Nemanja Matic si wada jir ah.
Muxuu Bakayoko Kusoo Kordhin Karaa Chelsea??
Xaqiiqatan Bakayoko waa xidig awood leh isla markaana heersare ah kaasi oo ay adagtahay sida lagu garaaco. Waa xidig la barbar dhigo N’Golo kale balse xataa dadka qaar ay aaminsanyihiin inuu ka wanaagsanyahay Kante.
Xidigan ayay dad badan oo kale barbar dhigaan Yaya Toure, walow uusan sida Toure goolasha u dhalin hadana waa xidig qaabka Yaya Toure oo kale leh. Hadii uu bilaabo inuu sida Yaya Toure goosha u abaaro, wuxuu noqon doonaa khad dhexe oo laga fajaco.
Awood, kubad jiidasho, baas qeybin, soo noqosho daafac iyo tayooyin badan oo Chelsea caawin doona ayuu xidigan ku qalabeysanyahay.
Xilli ciyaareedkii hore wuxuu kooxda Monaco u saftay in kabadan 50 kulan dhamaan tartamada wuxuuna ahaa udub dhexaadka ka caawiyay inay kooxdu hanato horyaalka League1.
Dhinaca kale marka laga eego waa xidig ka da’yar Matic waana xidig kubad jiidashada kaga wanaagsan Matic.
Suurto Gal Ma Tahay In Bakayoko Lagu Khasaaro??
Bakayoko waa khadka dhexe ee ugu qaalisanaa abid kaasi oo ay Chelsea lasoo wareegto. Waxaa musiibo ah inay koox ku khasaarto xidig sidaan oo kale qaali u ah.
Maxaa Dhacay Markii Ugu Danbeysay Ee Ay Chelsea Khad Dhexe Oo Qaali Ah Lasoo Wareegto?
Bakayoko kahor, N’Golo Kante ayaa ahaa khadka dhexe ee ugu qaalisan Cheslea abid. Waxay kasoo bixiyeen £32 Milyan bishan bisheedii. Kante waa halbahwlaha guulihii ay Chelsea horyaalka ka gaartay xilli ciyaareedkii hore waana xidig lagu faa’iiday.
Kahor intii uusan N’Golo kante kusoo biirin Blues, Cec Fabregas ayaa ahaa khadka dhexe ee ugu qaalisan kaasi oo ay kooxdu lasoo wareegto. Fabregas ilaa iyo haatan wuxuu Blues ka saaciday inay ku guuleystaan laba horyaal.
Sidoo kale xidigaha kala ah Micheal Essien iyo Frank Lampard ayaa lacago rikoor ah ugusoo biiray Blues sidoo kale iyaguna waxey xaqiijiyeen inay u qalmeen lacagihii lagasoo bixiyay.
marka aad dib u raacdo taariikhda, way yartahay inay Chelsea ku khasaarto khad dhexe kaasi oo ay lacag rikoor ah ka bixiso.
Hadaba Tiemoue Bakayoko ayaa loo badinayaa inuu noqon doona xidig muujin kara inuu u qalmo kharashka lagasoo bixiyay.
Jawaabtii Su’aasha Hore:-
Jawaabta saxda ah ee su’aashii usbuucii hore waxay aheyd Lucas Leiva.
Waxaa su’aashii hore si sax ah uga jawaabay akhristayaal badan balse waxaan halkan idiinku soo tabin sadexda ugu horeeya ee fursada u helay inay jawaabta saxaan.
Hambalyo Ayaan Leeyahay Asxaabtan Iyo Intii Kale Oo Aana Magacooda La Xusin Oo saxday jawaabta su’aashii usbuucii hore.
Hadaba su’aasha usbuucan ayaa u dhigan sida tan:- Waxaan ahay xidig ku guuleystay Premier League, Champions League, Europa League iyo FA Cup. Kooxdeyda waxaan u saftay 314 kulan oo horyaalka ah waxaan u ansixiyay 17 gool oo horyaalka ah. Qarankeygana waxaan u saftay 34 kulan. Kumaan Ahay??
Akhristayaal intaas waxaa inoogusoo idlaaday barnaamijkeenii usbuuclaha ahaa ee TAXANAHA FAAQIDAADA SUUQA oo aan idinla socodsiinayay aniga oo ah Mustafe Atam. Bogayga Facebook waxaad ku raadin kartaa magaceyga ama riix halkan buluuga ah dusheeda Mustafe Atam. Barnaamijkan mid lamid ah inta aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa Amaano Alla.
Filed in: Champions League, Europa League, France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino
32 thoughts on “TAXANAHA FAAQIDAADA SUUQA: Laba Xidig oo Man United Ka Dhigi Doona Mucjiso Aan La Qaban Karin, Sadex Sababood oo ay Barcelona Ugu Saxsantahay Ceyrsashada Veratti, Bedelka Tottenham Ee Kyle Walker, Waxa ay Bakayoko Iyo Rudiger Kusoo Kordhin Karaan Chelsea, Iyo Weliba Qodobo Kale Oo Xiiso Leh.”
Abdiraheem messi August 24, 2017 at 3:03 pm · Edit
sadaam cabdirahman August 16, 2017 at 11:04 pm · Edit
shaam cawl August 7, 2017 at 6:35 am · Edit
shaam cawl August 7, 2017 at 6:33 am · Edit
NUUX July 28, 2017 at 3:18 pm · Edit
zaki cadde July 20, 2017 at 9:52 am · Edit
waa Micheal carrick
Rooble yare July 20, 2017 at 9:50 am · Edit
Rooble yare July 20, 2017 at 9:49 am · Edit
waa michel carrick
tony kroos July 18, 2017 at 10:53 am · Edit
Ahmed Y Qalinle July 18, 2017 at 10:49 am · Edit
Ahmed Y Qalinle July 18, 2017 at 10:48 am · Edit
Bashir July 18, 2017 at 10:47 am · Edit
ahmed omaar July 18, 2017 at 9:03 am · Edit
yahye July 18, 2017 at 8:29 am · Edit
Ciyaaryahankaasi waa john on mikel
caamir July 18, 2017 at 1:21 am · Edit
waa micheal Carrick 314
john Terry 492 kulan ayuu saftay
bukhaari July 18, 2017 at 12:09 am · Edit
Sahin Xoshow says: July 18, 2017 at 12:05 am · Edit
Sahin xoshow July 18, 2017 at 12:01 am · Edit
Waa Michael Carrick
ismail moxamed July 17, 2017 at 11:40 pm · Edit
shiine July 17, 2017 at 11:40 pm · Edit
kabtankii hore man united ee vidic
sharmaan July 17, 2017 at 11:38 pm · Edit
Jaamac Baladka July 17, 2017 at 11:34 pm · Edit
asc dhamaan howl wadeenada Website kooxda gaar ahaan waxaan salamaya dadiyaha barnamijka Mustaf Atam salan kadib. hadii aan u guda galo su.asha barnamijka waxay jawabtayda tahay waa Ciyaaryahan Michael Carrick Horyalka wuxu u saftay 314 kulan Xulkana wuxu u saftay 34 horyalkana wuxu dhaliyey 17 gool wuxuna ku gulaysaty champion league Uefa Eurobe league Premier league Fa cup mar labaad waa muran la.aan Michael Carrick
kariim Moha ali July 17, 2017 at 11:21 pm · Edit
mohamed July 17, 2017 at 10:50 pm · Edit
Donza salaad ibrahim July 17, 2017 at 10:46 pm · Edit
adan ali isack July 17, 2017 at 10:38 pm · Edit
Wa michael carrick
Ugaaz moha ibnu Qallad ( Dani alves ) July 17, 2017 at 10:35 pm · Edit
waa john Terry
ÆhmEth MouzE July 17, 2017 at 10:13 pm · Edit
camir July 17, 2017 at 10:13 pm · Edit
daauud alexis July 17, 2017 at 10:09 pm · Edit
Ander Herrera July 17, 2017 at 9:52 pm · Edit